पिसाब रोक्ने बानी छ ? डाक्टर भन्छन् : पिसाब रोक्दा मिर्गाैला फेल हुन्छ ! – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौं । लामो समयसम्म पिसाब च्याप्दा यसले संक्रमण हुने सम्भावना बढाउँछ । जति पिसाब रोक्यो, उति पिसाब थैलीमा संक्रमण हुन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका युरोलोजिस्ट डा. पवन चालिसेले यसबारे जानकारी दिएका छन् ।
उनी अगाडि भन्छन् पिसाब थैलीमा धेरै बेरसम्म पिसाब जम्मा गर्दा यसले पिसाबनली पनि बिगिन्छ । थैली बिग्रियो भने पिसाब चुहिरहने समस्या पनि आउँछ । मधुमेहका बिरामीले पिसाब रोक्नु हुँदैन । पिसाब जम्मा गर्ने र नियन्त्रण गर्ने थैलीको आफ्नै क्षमता हुन्छ । निकै बेरसम्म पिसाब निस्किन पाएन भने फर्केर जान पनि सक्छ । यसले मिर्गौला कमजोर र फेलसम्म हुन सक्छ ।
काँग्रेसको शीर्ष नेतासहितको विशाल र्याली